Kedu ihe kpatara teknụzụ ji aghọ ihe dị mkpa maka ịga nke ọma n'ụlọ oriri na ọ |ụ |ụ | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 29, 2015 Sọnde, Septemba 27, 2015 Douglas Karr
Anyị nwere pọdkastị dị ịtụnanya nke a ga-ebipụta n'oge na-adịghị anya site na Shel Israel banyere akwụkwọ ya, Mmesapụ aka na-egbu egbu. Otu n'ime isiokwu ndị metụtara m n'ime mkparịta ụka ahụ bụ ọtụtụ teknụzụ ndị etinyere iji mee ka nrụpụta ọrụ na izi ezi dịkwuo ndị ahịa gburugburu. njikwa nke azụmahịa n'aka ndị ahịa.
O nwere ike ịbụ na ọ dịghị nnukwu nsogbu ọ bụla karịa ị na-arụ ụlọ nri na-aga nke ọma n'oge a. N'agbata ụgwọ ike, ntụgharị ọrụ, ụkpụrụ, na otu nde ihe ndị ọzọ nwere ike ịma ụlọ oriri na ọ challengeụ challengeụ aka - ugbu a, anyị enyela onye ọ bụla nchebe iji nyochaa ụlọ oriri na ọ restaurantụ onlineụ n'ịntanetị. Anaghị m ekwu na nke ahụ bụ ihe dị njọ - mana ahụmịhe ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ abụghị obere ọrụ ebube iji mee obi ụtọ. Ọ bụrụ na ọ bụ nnukwu ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ndị mmadụ ga-eme mkpesa banyere nchere na ọrụ ahụ. Ọ bụrụ n ’ọ bụ nri na-eju anya, o nwere ike iwe gị ogologo oge ịga tebụl gị. Ọ bụrụ n’abalị na-adịghị ahụkebe, ndị ọrụ nwere ike ịdị mkpụmkpụ na elezighị anya.
ebe teknụzụ na-enyere ndị ụlọ oriri na ọuraụuraụ aka bụ site n'inye ndị ahịa ikike ka ha na-elekọta. Nke a bụ teknụzụ dị iche iche 9 nke anaghị enyere aka - kama ọ na-adị oke mkpa na ahụmịhe ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ:
Social Media - kama ichere ichi na Yelp, ịnye mgbasa ozi mgbasa ozi ebe ị nwere ike imeghe mkparịta ụka na ndị ahịa ma mee ka ha laghachi bụ nnukwu azụmahịa.
Weebụsaịtị - tinye menu gị, maapụ nwere ntụzi aka, oge awa, akara ekwentị… ma ọ bụ ọbụlagodi vidio dị n'ịntanetị ka ndị na-elekọta gị nwee ike inweta enyemaka niile ha chọrọ.
Saịtị Nyocha - dobe data gị nke ọma ma zaghachi nzaghachi na saịtị nyocha.
blog - ọtụtụ ndị na-eme ụlọ oriri na ọuraụ areụ buru ibu n'obodo, na-enyere aka ịchọta ma ọ bụ na-elekọta ọpụpụ. Mee ka ndị mmadụ mara ihe ọma ị na-eme na blọọgụ!
Wi-Fi - mee ka ndị nọ n'afọ iri na ụma nwee obi ụtọ ma belata ihe yiri ka ọ bụ ogologo oge site na ikwe ka ndị na-elekọta gị nweta ntanetị. Sistemụ ụfọdụ na-enye gị ohere ijide data ndebanye maka ndị na-eji wi-fi gị ka ị nwee ike nweta ha na listi email gị.
Ndoputa Ntaneti - egosipụtakarị na aha gị adịghị na ndepụta ndoputa? Tinye ndoputa nke ntaneti ka ndi mmadu wee nwee obi ike na ha nọ n'ime sistemụ ma mara mgbe ha ga-egosi.
Mobile ịtụ - ọganihu na teknụzụ na-eme ka o kwe omume maka nnyefe ntanetị, ịpụ, na ọbụna iwu okpokoro ka ewere site na ngwaọrụ mkpanaka. Iwu ndị ahịa nyere bụ nke ziri ezi mgbe niile!
Kupọns dijitalụ - SMS na ederede ederede Kupọns, email na usoro iguzosi ike n'ihe na-eme ka ndị ahịa na-abịa azụ.
Nchekwa onwe - anaghịzi echere ndenye ego. Itinye mbadamba na emaili riteeti ka folks na-akwụ na-ahapụ na obere azụ na-apụta na mkpara gị.
Ndị na-eri nri n'ụlọ oriri na ọ loveụ loveụ hụrụ teknụzụ n'anya n'ihi na ha tụnyere ya ịrụ ọrụ ọsọsọ na, n'ikpeazụ, ọmarịcha nri iri nri. Ha na-achọ saịtị gị, ma ị nwere wi-fi, ndoputa, yana ịkwụ ụgwọ ekwentị. Ha na-agụ nyocha ma na-enyocha ọwa mgbasa ozi gị. You na-emeri ha na teknụzụ ma ọ bụ na-atụfu ha n'aka onye na-asọmpi?
Tags: Kupọns dijitalụmobile ịtụngwa nriblọgụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụụlọ oriri na ọ mobileụ mobileụ mobile ịtụụlọ oriri na ọ orderụ onlineụ online ịtụụlọ oriri na ọ reviewsụ reviewsụ reviewsụlọ oriri na ọ socialụ socialụ na-elekọta mmadụteknụzụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ .ụụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ websiteụlọ oriri na ọ wiụ wiụ wi-fisms Kupọnsndenye ndenye tebụlndozi okpokoro
Abamuru nke Iji Mbadamba ụrọ nke Sales Systems In-Store
Ọkt 6, 2015 na 1:52 PM
Nnukwu ihe omuma. Mụ na REVTECH Accelerator na Dallas na-arụ ọrụ iche iche na-eweta ihe ọhụrụ maka ahịa maka ụlọ oriri na ọtaụ Resụ, Retail & Hospitality. Anyị na-ahụ ezigbo ohere na mmalite-elekwasị anya na mmekọrịta ndị ahịa na-eto eto. Oge obi ụtọ. Daalụ maka edemede gị.
Daalụ maka iwepụta oge iji ruo eru! Ọ bụ ya mere eji arụ ọrụ a!
Nov 28, 2015 na 1:30 AM
Anyị na-eme ngwa ngwa mkpanaka n'ime obodo ndị nwere ihe ịga nke ọma na obodo - Miami, ndị nwe ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na-elekwasị anya n'ahịa ngwa ahịa na ndị na-ere ahịa dị ka Eat24 na ndị akwụkwọ ibe. Fọdụ ndị nwe ya na-ahọrọ iwu ngwa nke aka ha, ebe nke ahụ na-echekwa ego na% ọrụ na ogologo oge.